Nyoro Neon Mapepa
Kune iyo yese strip light indasitiri indasitiri, iripo mamiriro ekuvandudza akanaka kwazvo, asi makwikwi akasimba kwazvo. Basa redu ndere kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kuitira kuti vatengi vathembe zvigadzirwa zvedu. Chiedza chemwenje chine akasiyana siyana ekushandisa uye mashandiro; mberi ...
Kune iyo yese strip light indasitiri indasitiri, iripo mamiriro ekuvandudza akanaka kwazvo, asi makwikwi akasimba kwazvo. Basa redu ndere kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kuitira kuti vatengi vathembe zvigadzirwa zvedu. Chiedza chemwenje chine huwandu hwakawanda o ...
Kushanda uye kusarudzwa kwebhanhire remwenje
Iyo bhanhire remwenje rakakamurwa kuita rakaderera-voltage mwenje bhandi uye yakajairwa mwenje bhandi. Zvakadiniko nebhanhire remwenje rakashandiswa pamusoro? Nekushandisa kweasina kujeka mwenje sosi yemafashama sedenga, yekuwedzera mwenje sosi iri pasi pekabhineti, yekuwedzera mwenje sosi mu cabinet uye yekushongedza mwenje sosi, ...
Sarudzo hunyanzvi uye kumisikidza kwe LED mwenje bhandi
Kana tichishongedza, isu tinowanzoona kuti kune yakatungamirwa bhenji bhenji mune yekushongedza runyorwa, asi vazhinji varidzi havazive kuti chii. Muchokwadi, izvi zvakare zvakajairika. Kutanga, hapana hukama hwakawanda. Chechipiri, nekuti bhanhire remwenje rakavanzwa, isu tinongoona mwenje waro, asi isu hatigone kuona mumvuri waro. In ...
I123th Canton Fair yakapera zvinobudirira
Joineonlux inotarisana nekusimudzira, kugadzirwa uye kutengesa kweUSB marara. Yakahwina rumbidzo kubva kune vatengi vekunze uye yakwezvawo kutarisisa kwakapararira. Izvo zvipenga zvine hupenyu, zvine ruzha uye zvine ruzha. Vazhinji vatengi vakataura nezve izvo zvinhu zviri mutabhenakeri, uye kune mikana yehurefu ...
I121th Canton Fair yakapera zvinobudirira
Zhongshan Joyeonlux ane makore gumi nemanomwe ane ruzivo uye agara achienderana neazvino tekinoroji maererano nehunhu hwechigadzirwa, kushandira vatengi uye dhizaini yezvigadzirwa. Izvo zvakakosha kutaura kuti isu tinoteerera kune yakapusa dhizaini yekuchengetedza uye mhando. Joyeonlux inopa vatengi zvakasiyana ...
Semuenzaniso, iyo yakatsemurwa tambo yemwenje uye iyo yakati sandara mwenje inogona kuganhurwa mumhando nhatu, kureva iyo yakajairwa LED, iyo yakati wandei tambo rambi, uye yakati sandara tambo yemwenje.
1.Flexible LED mwenje weti yakaunganidzwa neFPC uye SMD LED, kuitira kuti ukobvu hwechigadzirwa hwaingova huremu hwesimbi, uye hautore nzvimbo; iwo akajairwa marongero anosanganisira 18 maLED ane 30cm kureba, 24 maUS uye 15 maUS, 24 maUS uye 30 maUS ane 50c ...
Ndezvipi matanho ekudzivirira ekuisa mwenje wechiedza che LED
Cherechedzo yekumisikidza mwenje mwenje bhanhire: wiring nzira ye LED mwenje bhandi. Iyo yakazara voltage ye LED mwenje bhandi ndeye DC 12V, saka switching magetsi magetsi anodiwa. Iko kukura kwesimba remagetsi kunoenderana nesimba uye nehurefu hwekubatana kweiyo mwenje mwenje bhandi. Iyo wiring yemono ...
Sarudzo ye LED mwenje bhandi zvinoenderana nechinangwa chekuisa uye mwenje
Musiyano uripakati pemagetsi-mwenje mwenje uye wakadzika-magetsi mwenje bhandi ndewe: yakakwira-magetsi mwenje bhandi inowanzo kuve 50/100 mita roll, voltage mwenje bhandi inowanzo kuve 5-mita roll, yakakwira-voltage mwenje bhandi haina mvura, yakaderera-voltage mwenje bhandi haina mvura kana kwete, rambi ...